Sandals Foundation waxay calaamadeysaa 10 sano oo ay caawinayeen Kaariibiyaanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Sandals Foundation waxay calaamadeysaa 10 sano oo ay caawinayeen Kaariibiyaanka
Caribbean • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Investments • Jamaica News Breaking • Wararka Raaxada • News • jiga • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Sannadkan wuxuu xusayaa 10-sano guuradii ka soo wareegtay aasaaskii Sandals, garabka samafalka ee Sandals iyo Xeebaha Dalxiisyada.
Sandals Foundation waa garabka samafalka ee Sandals Resorts International.
Waxay soo martay aasaaska Sandals iyo Xeebaha ay bulshada dib ugu celiyaan.
10-kii sano ee la soo dhaafay, Sandals wuxuu u shaqeynayay si hagar la’aan ah si uu si togan ugu saameeyo nolosha in ka badan 840,000 oo qof oo ku baahsan Caribbean-ka.
Muddo toban sano ah, Sandals Foundation waxay ka caawisay Caribbean-ka iyada oo loo marayo kobcinta isbeddel wanaagsan iyada oo loo marayo mashaariicda bulshada, waxbarashada, iyo deegaanka. Aasaasku wuxuu ahaa waddo loogu talagalay Sandals iyo Xeebaha inay dib ugu celiyaan bulshada iyada oo loo marayo dadaallada lagu taageerayo, kor loogu qaadayo, laguna hagaajinayo nolosha dadka reer Caribbean.
The Sanduuqa Sandals waa garabka samafalka ee Sandals Resorts International. Waa dhamaadka 3da sano ee u heellan inay door muhiim ah ka ciyaaraan nolosha bulshada halkaas oo ay ka hawlgasho dhammaan Kariibiyaanka.
Qoyska Sandals iyo Xeebaha waxaa ka mid ah in ka badan kaliya asxaabtooda dhammaan noocyada 4 iyo xafiisyada shirkadaha - waa bulshada ay ka soo jeedaan kooxda Sandals. Taasi waa sababta ay u sameeyaan wax walba oo ay awoodaan si ay isbeddel uga sameeyaan Kariibiyaanka - maxaa yeelay kooxda Sandals, waxay ku saabsan tahay qoyska.